चितवनलाई टाउको दुखाई : कहाँबाट आए यसरि चितवनमा कोरोना संक्रमित ? – Sanchar Patrika
August 18, 2020 218
चितवन – शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका पूर्वाधार तथा संरचना प्राप्त शहरलाई मानिसले सुगम, सहुलियत र सुविधाका रुपमा लिन्छन् । तर जिल्लामा प्राप्त यही सुविधा यतिखेर चितवनलाई भने टाउको दुखाई बनेको छ । चितवनमा स्वास्थ्य उपचार सुविधा र रोजगारीका कारण बाहिरी जिल्लाबाट आउने बिरामी र कामदारबाट कोरोना भाइरस (कोभिड १९) भित्रिएको पाइएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यससँगै उद्योग, कलकारखाना, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न ल्याइएका मजदुर पनि कोरोना सङ्क्रमणको अर्काे कारण बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ । लकडाउन सकिएसँगै अब कोरोना हट्यो भन्ने मानसिकताले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको अधिकारी बताउनुहुन्छ । पहिले परीक्षण कम गर्दा नदेखिएको भए पनि परीक्षण बढाएसँगै सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँको तर्क छ ।
Prevआजै रातीदेखि लागूहुने गरी ९ दिनको लागि कर्फ्यु लगाउने निर्णय
Nextअब आज देखी आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गरिने, कति लाग्छ शुल्क ?
४० करोड रुपैयाँ पर्ने दुर्लभ पुस्तकहरू घरमुनि गाडिएको अवस्थामा फेला